Boqor Burhan oo si weyn loogu soo Dhaweeyay Ohio – Radio Daljir
Boqor Burhan oo si weyn loogu soo Dhaweeyay Ohio
Abriil 14, 2015 3:46 b 0
Talaado, Abriil 14, 2015 (Daljir) —Habeenkii xalay ee Axadda waxaa lagu qabtey Hotel Embassy Suits ee magaaladda Columbus, Ohio. Xaflad lagu soo dhawaynayay Boqor Burhaan Boqor Muusse oo ay ka soo qaybgalaan boqolaal dadwaynaha ku nool gobalka Ohio ee wadanka Maraykanka.
Waxaa ka hadlay dad isugu jira Isimo, Haween, Culumo iyo siyaasiyiinta gobalka oo ay kamid ahaayeen Senator Ray Miller, Senator Charlete Tavares, Congresswoman Joyce Beatty, Senator Sherron Brown, Wiilka u sharaxan Duqa magaalad ( Mayor of Columbus) Fadlan haloo codeeyo aad ayuu bulshad Soomaaliyeed wax ugu qabtey. Masuuliyiintaan aad ayey Boqor Burhan Boqor Muuse ugu mahad naqeen sida wanaagsan ee uu bulshada Soomaaliyeed markast ugu adeego. Boqor Burhan Boqor Muuse wuxuu u mahad noqoy Senator Ray Miller, Senator Charlete B. Tavares, Senator Sherron Brown, Congress Joyce Beatty Burhan Mohamed Ahmed aad ula shaqeeyey fudeeyey in Boqor Burhan Boqor Muuse yimaado Wadanka Mareykanka. Dhamaan shacabka Soomaaliyeed waa u duceeyey waana u mahadnoqay.
By: Maxamuu Cabdi Ibraahim
Madaxweyne Xasan oo Maanta Cadaado Booqanaya